iinyanga 1 kunyaka 3 eyadlulayo #850 by baqhubi
Hiya. Ndiye ndamema ukususela nge-1997.
Ndidale ezininzi izithako eziqhelekileyo ze-FS9 kunye ne-FSX, kunye nokubuyiswa okumbalwa.
Amanye amalungu angakhumbuza 'ukuzonwabisa kwinqwelo-moya' kwintlawulo yeFS9.
Ndajoyina iRiooooo ngenxa yokuba uludwe lwewebhu lucacile - kunye neengqalelo ezinikezelwe ukuvuselela iinqwelo-moya ezikhululelwe ngaphambili.
iinyanga 1 kunyaka 3 eyadlulayo #853 by Dariussssss
Sawubona kwaye wamkela kwiRiooooo.
Ndiyabulela ngamagama amnandi, kwaye ndivule kakhulu ukuba ninakho ebhodini. Ndikhumbule ukuba uncedo, ndandenza loo nto kwi-FS9 yam, kungeyonto embi.
Zive ukhululekile ukuhlolisisa kwaye xa ufuna naluphi na uncedo, nantsi indawo oyifunayo.
iinyanga 1 kunyaka 3 eyadlulayo #862 by baqhubi
UDariussssss wabhala: Sawubona kwaye wamkele kwiRiooooo.
Ixesha ukwenza page: 0.423 imizuzwana